Biogesic for Kids — : Gandamar Grand Balloon ( Wholesale Center) | Philippines - Info about discounts, promotions, great deals, warehouse sales, big sales, clearance sales and monster sales in 2022.
Monday, December 10, 2018 N/A Health & Beauty Children’s Clothing
"ကလေးများအတွက် အခြေခံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပညာပေး ဟောပြောပွဲနှင့် ခရစ်စမတ် အကြိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကြီး" ကို မေမေ ဖေဖေနဲ့ သားသားမီးမီး တို့အတွက် Biogeisc for kids Myanmar မှ Gandamar Wholesale မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ့် အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးချင်ပါတယ်…......
မေမေ ဖေဖေနဲ့ သားသားမီးမီးတွေအတွက် ဆုလက်ဆောင်တွေများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် မိသားစုပြိုင်ပွဲ၊ သားသားမီးမီးတွေရဲ့ Talent kids show ၊ Myanmar Got Talent မှ အံ့သြစရာမျက်လှည့်အစီအစဉ် (Magic Show) ၊ သားသားမီးမီးများ ပျော်ရွှင်စေမယ့် ဆပ်ကပ် Show ၊ နဲ့ အခြားသော ပြိုင်ပွဲလေးများစွာ ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် ….
အခမဲ့ပွဲကြီးလည်းဖြစ်၊ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးစောဝင်း မှ ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ့်အပြင် တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေကို ခံစားခွင့်ရ၊ သားသားမီးမီးတွေလည်း ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကစားနည်းမျိုးစုံကစားနိုင်ဖို့ ဒီBiogesic for kids Myanmar messenger မှ တဆင့် Register လုပ်ထားလိုက်တော့နော်...
: ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ (စနေနေ့ )
⌛️⌛️⌛️ : နေ့လည် ၁နာရီခွဲ မှ ညနေ ၆ နာရီ အထိ
: Gandamar Grand Balloon ( Wholesale Center)
ဘိုငျအိုဂကျြဆဈကလေးအဖြားပြောကျဆေးရညျဟာ မွနျမာနိုငျငံမှ ဆရာဝနျတှနေဲ့‌ မမေတေို့ရဲ့
ယုံကွညျစိတျခမြှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတာအခုဆိုရငျ ၁၅ နှဈတိုငျတိုငျရှိခဲ့ပါပွီ ✨
၁၅ နှဈမှသညျနောငျနှဈ‌ပေါငျးမြားစှာတိုငျ မမေတေို့အတှကျ ယုံကွညျစိတျခရြမှု၊ ကနျြးမာပြျောရှငျမှုတ...
Jan 15, 2022 N/A Health & Beauty Children’s Clothing
Super Kids Contest ပွဲကို ဘိုင်အိုင်ဂျက်ဆစ်ကလေးအဖျားဆေးရည်မှမှ ပါဝင်ကူညီပံပိုးထားပါတယ်ရှင့်
ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ်ကလေးအဖျားကျဆေးရည်ဟာ အဖျားကိုအမြန်ဆုံးကျအောင် Taste Riteနည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသလို သားသားမီးမီးတို့အကြိုက်စတော်ဘယ်ရ...
Mar 19, 2019 N/A Health & Beauty Children’s Clothing
ဝီတိုရိယ Kids Dayတွင် Platinum Sponsorယူထားပါတယ်ရှင့်။
ဘိုင်အိုဂျက်ကလေးအဖျားပျောက်ဆေးရည်သည် Taste Rite နည်းပညာနှင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် သားသားမီးမီးတို့၏လျှာပေါ်တွင် ခါးသက် သည့်အရသာ မခံစားေ...
Feb 8, 2019 N/A Health & Beauty Children’s Clothing
ဝီတိုရိယ Kids Fairတွင် Platinum Sponsorယူထားပါတယ်ရှင့်။
ဘိုင်အိုဂျက်ကလေးအဖျားပျောက်ဆေးရည်သည် Taste Rite နည်းပညာနှင့် ထုတ်လုပ်ထားသော
ကြောင့် သားသားမီးမီးတို့၏လျှာပေါ်တွင် ခါးသက်သည့်အရသာ မခံစား...
Feb 7, 2019 N/A Health & Beauty Children’s Clothing